Ekpughela atụmatụ ikpeazụ nke ZTE Axon 9 Pro Gam akporosis
Fewbọchị ole na ole gara aga, e gosipụtara na ZTE ga-anọ na IFA 2018. Thedị ndị China ga-eweta ekwentị ọhụrụ ya, Axon 9 na ihe omume na Berlin. Ọ bụ ezie na ụdị a abụghị naanị nke anyị hụrụ na mpaghara a, ebe a mara ọkwa ọkwa ọhụrụ. Nke a bụ Axon 9 Pro, nke a na-atụ anya na a ga-ewepụta na ngwụcha ọnwa a nke August.
Modeldị ọhụrụ, nke ụlọ ọrụ ahụ edebanyela aha ọnwa ole na ole gara aga. Ugbu a, anyị enweelarịrị etiti anyị usoro ikpeazụ nke ZTE Axon 9 Pro a. Ekele maka ihe oyiyi ndị a anyị nwere ike ịhụ ihe nlereanya a kwadebere maka anyị.
Anyị nwere ike ịhụ na akara ahụ ahọrọla ekwentị nwere ọkwa, dị ka ọ dị na mbụ na ụdị ndị China. Anyị na-eguzo n'ihu nnukwu ọkwa, nke na-achịkwa ihuenyo Nke ngwaọrụ. A haziri sitere na iPhone X.
Na azụ nke ZTE Axon 9 Pro a anyị nwere igwefoto abụọ, nke etinyere na vetikal. N'okpuru ese foto anyị na-ahụ ọkụ ọkụ. Na mgbakwunye, ihe mmetụta mkpịsị aka ngwaọrụ ahụ na-echere anyị na azụ. Abụkarị a imewe na anyị na-ahụ ọtụtụ na ahịa.
Banyere nkọwa, Onwebeghi ihe amatara banyere akụrụngwa a. O ruola ọnwa ole na ole ụlọ ọrụ debanyere aha ZTE Axon 9 Pro a, mana ugbu a ọ nweghị nkọwa erutela maka ya. Ya mere o yiri ka anyị ga-echere ruo mgbe ngosi ya nwere data.
Akụkụ dị mma bụ na ị gaghị echere ogologo oge ruo mgbe ZTE Axon 9 Pro a ga-abịa, dị ka a tụrụ anya ya ga-eweta n'ihu ọnwa a. Ya mere izu na-abịa kwesịrị ịbụ ọkwa ugbu a. Anyị na-eche ụfọdụ nkwenye site na ụlọ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » ZTE » ZTE Axon 9 Pro nhazi ikpeazụ ekpughere